Suicide Archives - Zimbabwe Voice
zimbabwevoice_1September 3, 2021
Woman kills herself after querying why she was born disabled
A 25-year-old woman who was born with a disability, committed suicide after questioning her aunt why she was different from everybody else. Police confirmed the death by drowning, saying members of the public must take seriously the issue of psychosocial support for their relatives and loved ones living with some disability. Recounting the incident, Mashonaland Central provincial police spokesperson Assistant…
THERE was pandemonium on Saturday at Zvishavane Central Police Station after a 38-year- old mshika-shika (pirate taxi) driver committed suicide by consuming poison in protest after his vehicle was impounded by the police. Tapiwa Manyimo of Maglas suburb in the asbestos mining town was pronounced dead on arrival at Zvishavane District Hospital where he had been rushed for medical attention.…
Mutoko couple commits suicide over infidelity
A COUPLE from Mutoko committed suicide following a misunderstanding over infidelity. Peter Mahwamba (50) of Mukumbura village under Chief Chimoyo, hanged himself in his bedroom after villagers discovered the body of his wife Nyasha Chinake (44) hanging from a tree near their homestead following a fight over an extramarital affair. Mashonaland East provincial police spokesperson Inspector Simon Chazovachii confirmed the…